ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချက်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Travel » ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချက်များ
Posted by စဆရ ကြီး on May 3, 2011 in Travel | 16 comments
တမ်းတမ်းတတ လွမ်းခဲ့ရသော အမိမြေသို့ ပြန်ရပါတော့မည်..
ကြိုတင်တွေးကာ အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ထားမိသည်။
လေဆိပ်မှ ကောင်းမွန်စွာ အပြင်သို့ထွက်နိုင်စေရန်အတွက် လိုအပ်သည့်အရာများကို အိပ်ကပ်ထဲတွင် အသင့်ဆောင်သွားပါမည်။
မိမိ၏ အထုပ်အပိုးများကို အကောင်းအတိုင်း ရရှိစေရန်သော်လည်းကောင်း၊ ပျောက်ရှခြင်းမရှိစေရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း တတ်သမျှ၊ မှတ်သမျှ ဆုတောင်းများကို လေယာဉ်ဘီး မြေပြင်သို့ စတင်ထိတွေ့သည်နှင့် ဆုတောင်းနေပါမည်။
လေဆိပ်မှအထွက် မိမိအထုပ်အပိုးများအား တရားဝင်လုယက်သူများလက်ဝယ်သို့ မရောက်ရှိစေရန် မိမိကိုယ်တိုင် အစွမ်းကုန်စောင့်ရှောက်ပါမည်။
အဲကွန်းမပါသော ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် အငှားယာဉ်များအား စီးနင်းစဉ်တွင် ခါးပါတ်ကြိုးလဲ မရှိသောကြောင့် ကိုယ့်ခါးပါတ်ကိုယ် ထိုင်ခုံတွင် မြဲအောင်ချည်ပြီး ညီညာပေါက်ပြဲလှသော လမ်းမများထက်တွင် စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်စေရန် ပြင်ဆင်ထားပါမည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မိမိနိုင်ငံသို့ အလည်ပြန်ရောက်စဉ် ဧည့်သည်အဖြစ် ညစဉ် ဧည့်စာရင်းတိုင်ပါမည်။
ပျက်လိုက်၊ မလာလိုက်ရှိတတ်သော လျှပ်စစ်မီးများကို အန်တုရင်ဆိုင်ရန်အတွက် လက်နှိပ်ဓါတ်မီး၊ Emergency Light များ လောက်လောက်ငှငှ ဆောင်သွားပါမည်။
လိုင်းကားစီးလျင် စပါယ်ယာများ၏ အော်ငေါက်သံကို ခံနိုင်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ မထူးသော အထူးကားများကို တိုးဝှေ့တက်နိုင်ရန်အတွက် ကာယဗလလေ့ကျင့်ခန်းများ၊ သိုင်းပညာများကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် လေ့ကျင့်နေပါကြောင်းနှင့်..
တန်ဖိုးရှိလှသောအချိန်များကို မြန်မာနိုင်ငံနေရာတိုင်းရှိ ဘီယာဆိုင်များတွင် ကျကျနန၊ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချရန် စဉ်းစားထားပါကြောင်း..
လေဆိပ်မှစ၍ မိမိနေထိုင်သမျှ ကာလပါတ်လုံး၊ good governance အမည်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငယ်များအား ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းအမှုကို ရေလဲနှင့်ပြုကြရပါမည်။ ထိုမှတဖန် ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟ များ ခြူစားခြင်း မေတ္တာရပ်ခံတောင်းခံခြင်းတို့ကိုမလွဲမသွေရင်ဆိုင်ကြရပါမည်။ မိမိပြည်ပတွင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော ဒုက္ခ အခက်အခဲများကို ဟန်ဆောင်ဖုံးဖိကာ မစားရ၀ခမန်း ပြောလေ အခြူခံရလေဖြစ်မည်။
မိမိ ကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့သော မွေးစားရင်း စသော အထောက်အထားများ တပုံကြီး ရှိပါလျက်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများက နိုင်ငံခြားသားတစိမ်းကဲ့သို့ဆက်ဆံခြင်းခံရပါလိမ့်မည်။
လူ ရေ။အဆိုးတွေ အတွက်ပဲ ပြင်ဆင်မထားပါနဲ့ကွယ်၊
ဒါတော့ မြန်မာပြည်ကို စော်ကားလွန်းရာ ကြနေပြီနော်။ ခုချိန်ဆို မြန်မာပြည်မှာထွက်တဲ့ သီးနှံတွေ အသီးအရွက်တွေ မြန်မာအစားအစာတွေ (နိုင်ငံခြားမှာမရတာ- ဥပမာ ငါးပိ၊ ပဲပြုတ်လိုမျိုးတွေ) စားဖို့ စဉ်းစားကြည့်ပါလား။ ပျော်စရာလေးတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ စကားချပ်- မီးကလည်း ထင်သလောက်မပျက်တော့ပါဘူး။
အချိုမှုန်ကဲ၊ အငန်အစပ်များ၊ ဆေးသကြားထည့်ပြီး အရောင်ဆိုးထားတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားဖို့လည်း ပြင်ထားပါ။
ကိုကြောင်ကြီး ပြောသလို မဖြစ်အောင် အိမ်သူကို ချက်ခိုင်းပေ့ါ။ အသီးအနှံဆိုရင်လည်း အဲဒါတွေ မပါပါဘူး။
အထူးကားစီးရန် ကိုယ်ခံပညာ တက်ဖို့ မလိုပေမဲ့ ရန်တွေ့တတ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်… စပယ်ယာတွေကလည်း မိန်းမတွေ နည်းတူ ရန်တွေ့ကောင်းလွန်းလို့ပါ
ပြည်တော်ပြန်များအတွက် နေနည်းထိုင်နည်း အနီးကပ်သင်တန်းများပေးနေပါပြီ။
သင်တန်းခ ဈေးပြိုင်စနစ်နှင့် သတ်မှတ်ပါမည်။
ကိုဖောက် သင်တန်းမှ သင့်ဆီမှ ဖောက်ယူလို့ရတာမှန်သမျှ ဖောက်ယူဖို့စောင့်ရင်း….
ပြည်တော်ပြန်များအတွက် နေနည်းထိုင်နည်း အနီးကပ်သင်တန်းများကို အထူးပရိုမိုးရှင်းနဲ့အတူ
ပထမဦးဆုံးသင်တန်းတက်သူ (၃)ယောက်ကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ KTV များသို့ ၁ ရက်အိပ်ခရီးစဉ်နှင့်အတူ
သင်တန်းသား အယောက်(၁၀၀)ပြည့်ပါက စက်မှု(၂)ထုတ် ကား(၁)စီးအပါ
ဗလာမပါကံစမ်းမဲများဖောက်ပေးမည့် အစီအစဉ်များကိုပါ ထည့်သွင်းထားပါကြောင်း …..
အရမ်းကြီးလဲ မဆိုးသေးပါဘူး … မိသားစုနဲ့ ဆွေးမျိုးသားချင်းတွေအရိပ်က အားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားနိုင်ပါတယ် …
ပျော်စရာတွေကို တွေးလိုက်ရင် ပျော်စရာတွေ့ရလိမ့်မယ် ….
ဟိုမှာလို နေခွင့် ရမယ်လို့ မမျှော်လင့်ထားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .
ဒီမှာက အလုခံရဖို့သာ ရှိပါတယ် .. အဖမ်းခံရဖို့သာ ရှိပါတယ် .. အသတ်တော့ မခံရလောက်ပါဘူး .. (ဒီတစ်ချက် သာပါတယ်)
နောက်ပြီး စားစရိတ် ဒီမှာ နည်းနည်း သက်သာသလားလို့ .. ခရီးစရိတ် နည်းနည်း သက်သာသလားလို့
ကိုအရှုံး တွက်ချက်ပြဦးမယ် ဆိုရင် .. စောင့်ပြီး ဖတ်ကြမယ်လေ
မညီမညာ ပေါက်ပြဲ လို့ ထင်ပါရဲ့..
ရှုံး…လူရေ အခန်းဆက် ၀တ္ထုကို ဖတ်၇ဖို့ စောင့်မျှော်နေတာ။ ပြည်တော်ပြန်မှာဆိုတော့ ကြာဦးမှာပေါ့။ ပြည်တော်ပြန်ခရီး အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါစေ။
တက်လိုက် ကျလိုက်ဖြစ်နေသော အင်တာနက်ကို သုံးရန်အတွက် စိတ်ရှည်ရှည်ထားနည်းကို လေ့ကျင့်ထားရန် …..
အခုတောင်မှ အင်တာနက်က လိုင်းကျလိုက် တက်လိုက်..
သဂျီး ပုံပြင်ထဲက ကြယ်ငါးလေးတွေကိုပဲ.. လှိုင်းပုတ်လို့ ကမ်းပေါ် တက်တက်သွားတာ.. နောက်ထပ် လာမဲ့ လှိုင်းကို စောင့်နေရတယ်.. ရေထဲ ပြန်ရောက်ချင်လို့.. အဲလိုမျိုး အင်တာနက်ကို ကွန်ပြူတာ ရှေ့မှာ ထိုင်ပြီး မျှော်လင့်တကြီး စောင့်နေရတယ်။ ဒီနေ့ လိုင်းသိပ်မကောင်းဘူး။
ဒီလိုအသင့်ပြင်ဆင်လာတဲ့ “ရှုံးနိမ့်သူကို” မြန်မာပြည်ကကြိုဆိုပါတယ်။
လေဒီလေး လာကြိုလို့ ဝမ်းသာလုံးဆို့ပြီး